Mbipụta akwụkwọ usoro
Akwụkwọ obibi akwụkwọ na-agụnyekarị akwụkwọ C1s/C2s kpuchie/akwụkwọ ndina ,, c2s osisi nka/nnukwu nka nka, akwụkwọ enweghị akwụkwọ/akwụkwọ njikọ, akwụkwọ carbonless/NCR akwụkwọ, akwụkwọ mkpuchi dị arọ dị arọ/akwụkwọ LWC, akwụkwọ mmado na-ejide onwe ya. .
Akwụkwọ edemede C1S/C2S
C2s Art akwụkwọ bụ ụdị akwụkwọ a na -ekpuchi. A na -akpọkwa ya dị ka akwụkwọ ndina, ọ nwere ụdị ihe na -egbu maramara na matt, ọ bụ akwụkwọ obibi akwụkwọ adịchaghị mma sitere na akwụkwọ isi nwere mkpuchi ọcha. Na grammage zuru ezu bụ 80g, 90g, 100g, 115g, 120g, 128g, 135g, 150g, 157g, 200g, 250g. A na -ejikarị ya dị ka akwụkwọ akụkọ, akwụkwọ, katalọgụ, akwụkwọ akụkọ na akwụkwọ ikike.
ỤBỌDỤ C2S/EGO EGO dị elu nke ukwuu
Ogwe nka C2s bụ ụdị akwụkwọ mkpuchi, makwaara dị ka bọmbụ mkpuchi, bristol paper.It sitere na akwụkwọ ala nwere mkpuchi mkpuchi. A na -ekpuchi ya n'akụkụ abụọ.Ọ nwere akụkụ abụọ na -egbu maramara ma na -acha ọcha grammage zuru ezu bụ 210g, 230g, 250g, 300g, 350g, 400g.Ọ bụ ihe eji eme nwoke ka mkpuchi akwụkwọ, kaadị ekele, kaadị aha, kalenda na katalọgụ.
Woodfree dechapụ ebi akwụkwọ bụ ụdị uncoated akwụkwọ. Ọzọkwa aha dị ka bond paper.It adabara elu-ọsọ dechapụ obibi na rotary printing.The grammage cover 55g, 60g, 65g, 70g, 75g, 80g, 90g, 100g, 120g, 140g, 160g, 180g, 200g, 230g. A na-ejikarị ya maka akwụkwọ e biri ebi, akwụkwọ ndetu, akwụkwọ ozi, broshuọ mgbasa ozi na akwụkwọ ntuziaka ngwaahịa.
Akwụkwọ a na -enweghị carbon bụ ụdị akwụkwọ mkpuchi. Aha ọzọ dị ka akwụkwọ NCR/akwụkwọ nnomi. Ọ nwere akụkụ atọ nke CB/CFB/CF.CB pụtara mkpuchi azụ.CFB pụtara ihu n'ihu na azụ.CF pụtara ihu n'ihu. Mkpuchi grammage 45g, 50g, 55g, 60g, 70g, 75g na 80g. Ihe kachasị eji eme ihe bụ maka ibipụta akwụkwọ ọnụahịa, akwụkwọ akụ, akwụkwọ mbata, ndepụta azụmahịa na akwụkwọ mbipụta kọmputa.
Mpempe akwụkwọ mkpuchi mkpuchi ọkụ
Mpempe akwụkwọ mkpuchi dị arọ dị ka akwụkwọ mkpuchi.Ọ bụ aha dị mkpirikpi maka akwụkwọ LWC, grammage bụ 48g, 50g, 56g, 58g, 60g, 64g, 70g, 80g. na akwụkwọ mgbasa ozi.
Mpempe akwụkwọ mmado
Mpempe akwụkwọ mmado onwe onye bụ ụdị akwụkwọ mejupụtara.Ọ bụ akụkụ atọ nke ihe ihu, gluu na mpempe akwụkwọ wepụtara. Ihe ihu anyị nwere ike nye maka akwụkwọ na-egbu maramara, akwụkwọ na-egbu maramara, akwụkwọ nkwụsị, akwụkwọ ọkụ, PP Ihe nkiri ihe nkiri na ihe PVC. Anyị nwere ike nye gluu gbazere agbaze, gluu isi mmiri na gluu mmanụ. labeelu, na akara ọgwụ.